Al-Shabaab oo qorsheynaysa weerar ka dhan ah Jabuuti | KEYDMEDIA ONLINE
Al-Shabaab oo qorsheynaysa weerar ka dhan ah Jabuuti
Kooxda Al-Shabaab ayaa horey weerar ku qaaday Kenya iyo Uganda oo kamid ah dalalka Bariga Africa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hogaamiyaha Kooxda Al-Shabaab Au Cabeyda ayaa ku baaqay in weerar argagaxiso lagu qaado saldhigyada Mareykanka iyo Faransiiska ku leeyihiin dalka Jabuuti kahor doorashada Madaxtinimada dalkan dhaca Geeska Afrika.
Muuqaal cusub oo uu soo saarey, ayuu hogaamiyaha Al-Shabaab ugu baaqey Malleeshiyaadkiisa inay ka dhigtaan danaha Mareykanka iyo Faransiiska ee Jabuuti mudnaanta ugu sarreysa ee bartilmaameedkooda.
Wuxuu ku eedeeyay Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle inuu Geeska Afrika u rogay "saldhig milatari," kaasoo "weerar kasta oo Al-Shabaab lagu soo qaado laga soo qorsheeyo", wuxuuna ku tilmaamay Jabuuti dal dhaba-dhilif u ah Reer Galbeedka.
Madaxweyne Geelle ayaa xukunka hayay tan iyo sanadkii 1999, waxaana lagu wadaa inuu ku guuleysto markiisii ​​shanaad doorashada 9-ka bisha April ee 2021 ka dhacaysa Jabuuti, oo ah dal istiraatiiji ah oo martigeliya saldhigyada milatari ee ugu bdan Afrika oo ay leeyihiin awoodaha Caalamka.
Jabuuti oo xornimada ka qaadatay Faransiiska 1977 ayaa waxay hadda hoy u tahay ciidanka ugu badan ee Faransiiska ee Afrika - ku dhowaad 1,500 oo askari ayaa ku sugan. Mareykanka sidoo kale wuxuu ku leeyahay saldhig joogto ah, waxaana ka jooga ilaa 4,000 oo askari.
Dalalka Japan, Shiinaha, Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa sidoo kale saldhigyo ku leh Jabuuti, waxayna taasi ka dhigtay dalkan bartilmaameedka koowaad ee Kooxda Al-Shabaab oo horey u weerartay Kenya iyo Uganda.
Jabuuti Ciidan ayaa ka jooga Soomaaliya oo qeyb ka ah AMISOM, waxana ka howlgalaan gobolka Hiiraan.